Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany UAE » Fipoahana mahery vaika any Dubai
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany UAE • Vaovao isan-karazany
Tsy fantatra mazava ny habetsaky ny fahasimbana nateraky ny fipoahan'ny seranan-tsambo sy ny entana manodidina.
Fampihorohoroana tamin'ilay fipoahana no tsapa manerana an'i Dubai.
Ilay fipoahana dia nandefa baomba afo lehibe tany an-danitra.
Tsy nisy ny tatitra momba ny fahavoazana na ny fahasimbana teo noho eo.
Ny mponina Dubai dia nitatitra fa naheno fipoahana mafy eraky ny tanàna tamin'ny alarobia lasa teo, niaraka tamin'ny maso nanatri-maso ny sasany nandefa sary sy sarina baomba afo lehibe niseho teo amin'ny seranan-tsambon'i Dubai.
Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra ao amin'ny governemantan'ny tanàn-dehibe dia nisy hain-trano lehibe nipoitra tao anaty kaontenera voatahiry teo ambonin'ny sambo iray niantsona tao amin'ny seranan'i Jebel Ali, satria ny tanàna lehibe indrindra ao UAE dia nateraky ny fipoahana lehibe.
Nilaza ny tompon’andraikitra fa tsy misy ny tatitra momba ny maty. Tsy fantatra mazava ny habetsaky ny fahasimbana nateraky ny fipoahan'ny seranan-tsambo sy ny entana manodidina.
Goavana tokoa ny afo ka tazana manerana ny seranan-tsambo izany, araka ny horonantsary nozaraina tao amin'ny media sosialy.
Lahatsary hafa dia nampiseho ny sampan-draharaha maika any Dubai izay nanandrana namono ny lelafo niaraka tamin'ny antontam-bato miparitaka manodidina ny seranana akaikin'ny sambo voakasik'izany, ary ny farihy may kosa mbola mirehitra eo akaikin'ny vaky sisan-javatra.
Tsy mbola nisy ny naratra hatreto, hoy ny governemanta Dubai tamin'ny fanavaozana farany. Nisy ekipa fiarovana sivily tany Dubai nalefa hiatrika ny afo, hoy ihany izy, ary voafehy ny afo.
Ny seranan-tsambo Jebel Ali any Dubai dia iray amin'ireo lehibe indrindra manerantany ary lehibe indrindra any Moyen Orient. Izy io dia mitondra entana avy any amin'ny kaontinanta Indianina, Afrika ary Azia. Ny seranan-tsambo, tantanan'ny DP World, dia misy kaontenera fitaterana efatra miompana amina sambo lehibe indrindra manerantany.